मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सको संस्थापकले सेयर बिक्री गर्दै, क-कसले भर्न पाइने ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सको संस्थापकले सेयर बिक्री गर्दै, क-कसले भर्न पाइने ?
काठमाडौं - मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकका केही संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्न चाहेका छन् । संस्थापक सेयरधनीको उक्त सेयर खरिद गर्न कम्पनीले ३५ दिनको समय दिएर आवेदन खुला गरेको छ । यसमा पहिलो प्राथमिकता संस्थापक सेयरधनीलाई नै दिनुपर्ने भएकाले मिर्मिरेले सेयर लिन चाहने अन्य संस्थापकले ३५ दिन भित्र आवश्यक कागजात सहित सम्पर्क गर्न भनेको छ ।
साथमा लिन चाहेको सेयर कित्ता खुलाई आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदन मिर्मिरेको केन्द्रीय कार्यालय बनेपामा दिनुपर्नेछ । ३५ दिन भित्र आवश्यक आवेदन नपरेको अवस्थामा भने अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई बिक्री खुला गरिनेछ । कम्पनीले बिक्री गर्न चाहेको संस्थापक सेयर कित्ता भने खुलाइएको छैन ।